စီမံ/တာဝန်ဝတ္တရားများ | Commerce
စီမံရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ၏ လက်အောက်တွင် ဝန်ထမ်းစီမံရေးရာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနစု၊ အထွေထွေစီမံရေးရာနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနစု ဟူ၍ ဌာနစု(၂)ခု ခွဲထားပါသည်။
ဝန်ထမ်းစီမံရေးရာနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနစုသည် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ရေးဆွဲပြုစုခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အမည်စာရင်းများ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပြုစုခြင်း၊ Ebis တွင် ထည့်သွင်းရေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လစဉ်လူအင်အားစာရင်းနှင့် လစာစရိတ်များပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအုပ်စုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ ပြည်ပခွင့်ကိစ္စရပ် များ၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲလစာ ခြားနားလစာနှစ်တိုးများ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်လွန် ပင်စင်၊ မိသားစုပင်စင်များအား စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများခွင့်ခံစားခြင်းများ၊ ဝန်ထမ်းများခရီး သွားလာခွင့် (MO) ထုတ်ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းစေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များ၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနလုပ်ငန်းစဉ်လှုပ်ရှားမှုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များဂါရဝပြု တွေ့ဆုံပွဲမှတ်တမ်း၊ ပြည်တွင်းခရီးစဉ် ရုပ်မြင်၊ ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများကို သတင်းစာများတွင် သတင်းထည့်သွင်းရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အထွေထွေစီမံရေးရာနှင့် မော်တော်ယာဉ်ဌာနစုသည် နိုင်ငံတော်ပိုင် အဆောက်အဦလွှဲပြောင်း အပ်နှံရေး၊ ရောင်းချရေးအကျိုးတူအိမ်ရာစီမံကိန်းကိစ္စရပ်များ ဌာနပိုင်အဆောက်အဦများအတွက် အခွန်အခ နှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးခပေးချေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဌာနပိုင်အဆောက်အဦငှားရမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခဝင်ငွေ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ အိမ်ရာများတွင် ဝန်ထမ်းများအားနေရာချထားခြင်း၊ မြို့သစ်တွင် မြေကွက်ရရှိရေး၊ နေအိမ် ဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးထားရှိမှုစာရင်းပြုစုတင်ပြခြင်း၊ ငွေလုံးငွေရင်း ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းများစိစစ်ခြင်း၊ လစဉ်လေးလပတ် အကောင်အထည်ဖော်မှုစာရင်းပြုစုခြင်း၊ စာရင်း ပယ်ဖျက်အမှုတွဲများအား ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဌာနသို့ တင်ပြခြင်းနှင့် Cabinet သို့ အတည်ပြုချက် တောင်းခံခြင်း၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းရုံးရှိ ဖုန်းစာရင်းများပြုစုခြင်းနှင့် မီတာခ၊ အခွန်အခကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဌာနခွဲအားလုံး အသုံးပြုရန်ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ ဌာနကြီးတစ်ခု လုံး၏ ဝင်စာ/ထွက်စာများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ပေးပို့ဖြန့်ပေးခြင်း၊ ရုံး၊ အိမ်ရာ၊ အဆောင်များ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အခမ်းအနားပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း၊ လုံခြုံရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်သက်တိုးကိစ္စ၊ ယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ၊ အခွန်အခစာအုပ်များ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စက်သုံးဆီများ အချိန်မီထုတ်ယူရရှိရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊ စက်သုံးဆီစာရင်း များအားပြုစု၍ ပြန်တမ်းများပေးပို့ခြင်း၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်မှုအသုံးစရိတ်များအား စနစ်တကျ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ ရုံး ပရဝဏ်စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
Administration and Training Department’s Responsibilities
Administration and Training Department is divided into two groups such as administration and training division and general administration and motor trans port division.
Administration & Training Division’s responsibilities are setting up the organization structure of Directorate of Trade, collecting the biography of the government staffs, supervising on putting at ebis, combining and sending the list of the staffs and monthly payment bill, holding the examination for oversea training and promotion matters, shifting and resigning the staffs within the ministry, implementing the civil sew ant honorable certificate, permitting the request bill, proceeding the pension and leaves matters, is swing the movement order, handling the oversea and domestic training including export, import regulation one, training on office works, taking the photos and video of the activities of the ministry such as the courtesy call and senior official meeting.
General Administration and Motor Transport Division responsibilities are handing over the State-Owned Buildings , Collecting the electric bills and the hiring fees of the building owned by the Ministry, implementing the allocation of the real-estate, monitoring of the fixed assets, reporting the quarterly meeting, submitting the cancelled affairs to the relevant department and requesting to get the confirmation from the cabinet, distributing of the office paper and stationary, delivering letters to the concerned department, maintaining the office building, housing and hostle, preparing the ceremony, planning the strategy of security , supervising the security guard, arranging the motor vehicle matters such as registration and taking out the petroleum, filing the petroleum list and sending the report and motor car maintenance charges , managing the campus and surroundings to be green and beautiful.
တာဝန်ဝတ္တရားများ (ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် )